MOETHIHAAUNG: Hypertension သွေးတိုးရောဂါ
သွေးတိုးရှိနေသူပေါင်း တကမ္ဘာလုံးမှာ ၁ ဘီလီယမ် လောက်တောင်မှ ရှိနိုင်တယ်။ သွေးလွှတ်ကြောထဲမှာ ဖိအားတွေ များနေတာကို ခေါ်ပါတယ်။ သွေးဖိအားအဖြေမှာ အထက်ဂဏန်းနဲ့ အောက်ဂဏန်းဆိုပြီး ရှိတယ်။ အထက်ဂဏန်းဆိုတာ နှလုံးက သွေးတွေကို ညှစ်ထုတ်လိုက်ချိန်မှာ ရှိနေတဲ့ သွေးလွှတ်ကြောထဲရှိတဲ့ ဖိအားဖြစ်ပြီး၊ အောက်ဂဏန်းကတော့ သာမန်အချိန်မှာ ရှိနေတဲ့ ဖိအားဖြစ်တယ်။ သွေးဖိအားကို ၅ မိနစ်ခြား ၂ ခါတိုင်းတာ ကောင်းတယ်။
သွေးတိုးရောဂါ နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ၉ဝ-၉၅% မှာ အကြောင်းရင်း တိတိကျကျ မသိရဘဲဖြစ်တယ်။ (အဆင်ရှယ်) သွေးတိုးလို့ ခေါ်တယ်။ ဒုတိယအမျိုးအစားကတော့ ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ သွေးလွှတ်ကြောမကြီးရောဂါ၊ ကျောက်ကပ် အထက်မှာရှိတဲ့ (အဒြီနယ်လ်-ဂလင်း) ရောဂါတွေကြောင့် ဖြစ်ရတယ်။ NSAIDs အနာ-အကိုက်ပျောက်ဆေး နဲ့ Steroids စတီရွိုက်-ဆေးတွေကြောင့်လဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ၁ဝ% မှာလဲ ဖြစ်တတ်တယ်။ အအိပ်ပျက်ရင်လည်း ဖြစ်တတ်တယ်။
ဘာလက္ခဏာမှ မပြသူက ပိုများတယ်။ ခေါင်းမူး၊ ခေါင်းကိုက် မျက်စိဝါး၊ အန်တာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ သွေးထဲမှာ Seruam Creatinine များနေတာကို စမ်းတွေ့ရမယ်။ ဆီးထဲမှာလဲ (ပရိုတင်း) ပါနေနိုင်တယ်။ အသက် ၄ဝ-၇ဝ နှစ်ကြား လူတွေ အထက်သွေး ၂ဝ တိုးတိုင်း၊ အောက်သွေး ၁ဝ တိုးတိုင်း နှလုံး-သွေးကြောရောဂါ ဖြစ်စရာ ၂ ဆတိုးလာတယ်။
သွေးတိုးရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ရောဂါတွေ
• နာတာရှည် သွေးတိုး ဖြစ်လာရင်၊ သွေးလွှတ်ကြောလေးတွေရဲ့နံရံ ထူ-မာလာမယ်၊ နှလုံးသွား သွေးလွှတ်ကြောကျဉ်းလို့ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း-ပိတ်နိုင်တယ်၊ အဲလိုဖြစ်လို့ ရင်ပတ် အလွန်နာတာကို နှလုံး (အတက်) ရတယ်လို့ ခေါ်တယ်။
• အလုပ်ပိုလုပ်ရလို့ နှလုံးကြီးလာမယ်။ နှလုံးရောဂါ တခုခု ဖြစ်နိုင်တယ်၊ ၂၅% မှာ ECG နဲ့ သိနိုင်တဲ့ နှလုံးဘယ်ဘက် အောက်ခန်းကြီးတာ ဖြစ်တတ်တယ်။
• ဦးနှောက် သွေးကြောကျဉ်း-ပိတ်-သွေးယိုလို့ ဦးနှောက် အလုပ် မလုပ်နိုင်တော့ဘဲ လေဖြတ်တာကို (ဆထုပ်) ရတယ်လို့ ခေါ်တယ်။ ၈၅% က သွေးလွှတ်ကြောလေးတွေ ကျဉ်းပြီးဖြစ်ရတယ်။ ၁၅%က သွေးယိုလို့ ဖြစ်ရတယ်။
• မှတ်ဥာဏ်ချို့တဲ့မှုလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။
• မျက်စိထဲက အရုပ်ထင်တဲ့နေရာ မြင်လွှာကိုသွားတဲ့ သွေးလွှတ်ကြောတွေကို ထိခိုက်နိုင်တယ်။
• ကျောက်ကပ်-ရောဂါ ဝင်လာနိုင်တယ်။
• ခြေဖျား-လက်ဖျား သွေးမလျှောက်လို့ (ဂင်၈ရင်း) အနာဖြစ်တတ်တယ်။
သွေးတိုး-ရောဂါကို ဘယ်လို ကုမလဲ
ဆရာဝန်တွေက အတော်ညံ့ကြတယ်။ ပျောက်အောင် မလုပ်နိုင်သေးပါ။ သွေးတိုးရှိ-မရှိ စောစောစီးစီး သိရင် ကောင်းတယ်။ နောက်ဆက် ရောဂါတွေ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်မယ်။ သွေးကျဆေး အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ အလွန် အရေးပါတာ အစားအစာ။ ဆေးလိပ်၊ အရက်၊ ကော်ဖီ၊ ဝတာတွေက ပိုဆိုးစေသည်။ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ရင် သက်သာမယ်။
1. Diuretics ဆီးသွားစေတဲ့ဆေး အုပ်စု၊ Hydrochlorothiazide, Lasix, Torsemide, Triamterene, Hydrochlorothiazide, Metolazone
2. Beta-blockers (ဘီတာ-ဘလော့ကား) အုပ်စု၊ Atenolol, Propranolol, Metoprolol, Nadolol, Betaxolol, Acebutolol, Pindolol, Bisoprolol
3. ACE inhibitors (အေစီအီး-အင်ဟဘစ်တာ) အုပ်စု၊ Enalapril, Captopril, Lisinopril, Benazepril, Quinapril, Perindopril, Ramipril, Trandolapril, Fosinopril, Moexipril
4. Angiotensin receptor blocker (ARB) (အေအာရ်ဘီ) အုပ်စု၊ Losartan, Irbesartan, Valsartan, Candesartan, Olmesartan, Telmisartan, Eprosartan
5. Calcium channel blockers (CCBs) (စီစီဘီ) အုပ်စု၊ Amlodipine, Sustained release Nifedipine, Felodipine, Nisoldipine
6. Alpha-blockers (အာလ်ဖါ-ဘလော့ကား) အုပ်စု၊ Clonidine
• သွေးကျဆေး တမျိုးမက ရောပေးပါမယ်။
• နှလုံးမကောင်းရင်၊ ကျောက်ကပ်မကောင်းရင်၊ နှလုံးသွေးကြော ကျဉ်းနေရင်၊ (ACE) inhibitors or (ARB) ဆေးတွေကို သုံးသင့်တယ်။
• နှလုံးခုန် မြန်နေသူများနေသူတွေကို Beta-blockers ဆေးတွေကို သုံးသင့်တယ်။
• ကိုယ်ရောင်နေရင် Diuretics ဆီးသွားစေတဲ့ ဆေးတွေပါပေးရမယ်။
• ကိုယ်ဝန် သွေးဆိပ်တက်ရောဂါ Preeclampsia (PET) or Eclampsia ဖြစ်နေရင် Beta-blockers, Hydralazine, Labetalol, Alpha Methyldopa, Calcium Channel Blockers တွေ ပေးနိုင်တယ်။ ACE inhibitors, ARB drugs, and Diuretics တွေကို မပေးရပါ။
• သွေးတိုး များလွန်းနေရင် (ACE) inhibitors, (ARB), Beta-blockers, Diuretic, Calcium Channel Blockers, Alpha-blockers, Clonidine, Minoxidil, Vasopeptidase blocker တွေကို ပေးနိုင်တယ်။
• အရေးပေါ်အခြေအနေမှာ Sodium Nitroprusside နဲ့ Labetalol ထိုးဆေး ထိုးပေးနိုင်တယ်။
• “အစားမတော် တလုပ်” ဆိုတာ ဒီနေရာမှာလဲ မှန်တယ်။ ဆန်-ဂျုံ-ပြောင်း-ပြောင်းဖူး-ဘာလီ-ရိုင်းစပါး-အုတ်စပါး စတဲ့ အနှံတွေကို ဖွေးဖြူသွားတဲ့အထိ မဖွပ်သေးဘဲ စားသုံးတာ ပိုကောင်းတယ်။ ဒီအစေ့တွေကို ဖွပ်လိုက်ရင် အစိတ်အပိုင်း ၂ မျိုးက မရှိတော့ဘူး၊ ကြက်သား၊ ငါး၊ နဲ့ အစေ့အဆံတွေကို အစားခိုင်းပြီး၊ အဆီ၊ အမဲသား-ဝက်သား-ဆိတ်သား၊ အချိုတွေနဲ့ သကြားပါ သောက်စရာတွေကို လျှော့စေတယ်။
• လူအများစားသုံးကြတဲ့ ကြံကထုတ်တဲ့ သကြားမျိုးက ဘာလို့လဲ မပြောနိုင်ပေမဲ့ သွေးတိုးစေတယ်။
• (ဖိုင်ဘာ) ခေါ်တဲ့ အမျှဉ်ပါတဲ့ အစာတွေကို ညွှန်းတယ်။
• “ဆားမပါမပြီး” လို့ ဆိုရပေမဲ့ “ဆားစားရင် သွေးတိုးများတယ်”။ ဆားဆိုတာ (ဆိုဒီယမ်) ဖြစ်တယ်။
• ဆားစားများတဲ့ လူမျိုးတွေမှာ သွေးတိုး ပိုဖြစ်တယ်။ ဂျပန်၊ အမေရိကန်တွေမှာ များတယ်။ တဦးချင်း စားသုံးမှု နည်းတဲ့ အာဖရိကမယ်နေတဲ့ လူမဲတွေမှာ နည်းတယ်။ အမေရိကားနေတဲ့ လူမဲတွေက အဲလိုမဟုတ်ဘူး။
• တနေ့တာ စားရမဲ့ ဆားပမာဏဟာ 2,400 mg ထက် မပိုသင့်ပါတဲ့။ အိမ်သုံးဆားမှာ (ဆိုဒီယမ်) ၄ဝ% ပါတယ်။ အကြမ်းဖျင်းပြောရရင် ပါးစပ်ထဲဝင်သမျှ အစာ-အရည်တွေထဲမှာ တနေ့ကို ဆား လက်ဖက်ရည်-ဇွန်းလေး တဇွန်းစာသာ ပါပါစေ။
• သုတေသနလုပ်တော့ တနေ့ကို ဆား 1,500 mg သာ စားသူတွေမှာ အကျိုးရှိတာ တွေ့ရတယ်။
• “အစာအာဟာရနည်းနဲ့ ကုသလို့ သွေးတိုးမဖြစ်”၊ “သွေးဆိုး ရှိနေရင်လဲ သက်သာတယ်”။ တရုတ်နံနံ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီ၊ ခရမ်းချဉ်၊ မုံလာပွင့်စိမ်း၊ မုံလာဥနီ၊ နနွင်း၊ စမုန်နက်၊ တောရုံး၊ ငရုတ်ကောင်း၊ ပင်စိမ်း၊
• ဝယ်စားတဲ့အစာတွေထဲမှာ ဆားဘယ်လောက် ပါတယ်ဆိုတာ သတိထား ဆင်ခြင်-ရှောင်ကြဉ်ပါ၊ အသင့်ဝယ်ရတဲ့ အစားအစာ၊ သွားရည်စာတွေ ရှောင်ပါ။
• ချက်-ပြုတ်-ကျော်-လှာ်ပြီးသာ အစားထဲ ဆား ထပ်မထည့်ပါနဲ့။ အိန္ဒိယား၊ မီဇိုးနဲ့ ချင်းလူမျိုးတွေ ဆားပန်းကန် တည်တဲ့အလေ့ ရှိကြတယ်။ သွေးတိုးရောဂါ ဆိုးစေနိုင်တယ်။
• ဗမာကြိုက် ငါးပိ-ငံပြာရည်-ငါးခြောက်-ပုဇွန်ခြောက်၊ တရုတ်လက်စွဲ ပဲငံပြာရည်၊ (ဆိုယာ-ဆော့စ်)၊ ဗိုလ်သုံး (ဘာဘီကျူး-ဆော့စ်)၊ လျှော့ပါ။
• အချဉ်တည်ထားတာ မစားပါနဲ့၊ ဆားသုံး-အခြောက်လှမ်းအစာ မတည့်ပါ။
• ဟင်းချိုမှုံ့ (MSG) မှာ (ဆိုဒီယမ်) ပါလို့ မသင့်ပါ။
• ဆားတခုထဲ လျှော့တာနဲ့ မရသေးပါ။ (ပိုတက်ဆီယမ်) များဘို့ လိုသေးတယ်။ Potassium acetate, Potassium bicarbonate, Potassium citrate, Potassium chloride, Potassium gluconate နာမယ်နဲ့ ဆေးသောက်ပါ၊ ငါး၊ ပင်လယ်စာ၊ ချဉ်တဲ့အသီး၊ ပန်းသီး၊ ငှက်ပျောသီး တွေနဲ့ မုံလာပွင့်စိမ်း၊ ပဲ၊ ပဲသီး၊ ခရမ်းချဉ်၊ အခွံပပါအာလူး၊ ဟင်းနုနွယ်ရွက်၊ မုံညင်းဖြူတွေမှာ များများပါတယ်။ ကလေးတွေမှာ (ပိုတက်ဆီယမ်) တနေ့ 780-1,600 mg နဲ့ လူကြီးတွေမှာ 1,600-2,000 mg လိုတယ်။
• Omega-3 fatty acids (အိုမီဂါ သရီး) က အကျိုးများစေတယ်။
• (ကယ်လ်စီယမ်) (800-1,200 mg) ဒါမှမဟုတ် (မဂ္ဂနီဆီယမ်) 300 mg သောက်ပါ။
• သွေးတိုး အစာအာဟာရ ဥပဒေသ = S သုံးလုံး ဥပဒေသမှတ်ပါ။ Saturated fat, Sugar and Salt တွေ နည်းရမယ်။
ပြည့်ဝအဆီအမျိုးအစား များဆဲ့အစာအစာတွေ = မလိုင်၊ ဒိန်ခဲ၊ ထောပတ်၊ ဂီး၊ စားအုံးဆီ၊ ဝါစေ့ဆီ၊ ချော့ကလက်။
• (ကယ်လိုရီ) + ကိုယ်အလေးချိန် + အဆီတွေဟာ သွေးတိုးအတွက် မကောင်းပါ။ (ဆိုဒီယမ်) များတာ လုံးဝမကောင်းပါ။ (ပိုတက်ဆီယမ်) များတာ ကောင်းတယ်။ (ကယ်လ်ဆီယမ်) နည်းတာ မကောင်းပါ။
Exercise and Hypertension သွေးတိုးသမားတွေအတွက် လေ့ကျင့်ခန်း
1. သွေးပူ-လေ့ကျင့်ခန်း ၅-၁ဝ မိနစ် နဲ့စပါ။
2. (ယောဂ) ဖြစ်ဖြစ် တခြားနည်းဖြစ်ဖြစ် လုပ်ပါ။
3. အများဆုံး-နှလုံးခုန်နှုန်း ရဲ့ ၈ဝ% ထက် မပိုသင့်ပါ။ ၂၂ဝ ထဲကနေ ကိုယ့်အသက်ကို နုတ်ရင် MHR ရတယ်။ (MHR = 220 – Age)
4. ကိုယ့်အလေးချိန်ကနေ ဖိစီးတဲ့ လေ့ကျင့်နည်းမျိုး မလုပ်သင့်ပါ။ အများအားဖြင့် လူတွေက ဝကြလို့ပါ။
5. တခါလုပ်ရင် ၂ဝ-၃ဝ မိနစ် ကြာသင့်တယ်။ ၇ ရက်တပါတ်မှ ၄ ရက်လုပ်သင့်တယ်။ ပြီးရင် ၅-၁ဝ မိနစ် နားလိုက်ပါ။
6. အလေးချိန်-လျှော့နည်း လုပ်နေတုံးမှာ အသက်ရှူ အောင့်ထားတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။
သွေးတိုး သက်သာအောင် ငန်-ချို-ဆီ ရှောင်ပါ။
Posted by Myo Lwin Aung at 11:54 AM